फाल्गुन १५, २०७६ Sarangi Radio Network
नवलपुर समाज जापानको दोश्रो अधिबेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा सागर कँडेल
शिक्षक लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक, आयोग पनि खुल्दै
गुरुङ साहित्यिक मञ्चकाे कविता प्रतियोगिता हुने, विजेतालाई दश हजार
बलिदानी दिवसमा घरमै पुगेर रम्तेल बाबा आमालाई सम्मान
संविधान संशोधनको च्याप्टर क्लोज, बामदेवबारे नेकपाको यस्ताे निर्णय
एमसीसी र बाँस्कोटा काण्डमा यसकारण नेकपा माैन !
किशाेरीलाई बन्धक बनाएर बलात्कार, मन्त्रीकै सल्लाहकार पक्राउ
विशाल सुनचाँदी दुकानद्धारा सिद्ध माविलाई रु ५१ हजार ५ सय ५५ सहयोग
दिदिबहिनी डान्स आइडलकाे उपाधी मनिष परियारलाई
पुष १०, २०७५ मनु बिद्राेही
तीर्थ समीर गजल लेख्छन् । "एक बर्ष भयो साहित्यमा लत लागेको", उनी भन्छन् । आफ्ना दाइ गणेश ढकालका साहित्यिक सिर्जनाबाट प्रभावित भएर साहित्यमा केही अठोट लिएका छन् । केही नयाँ गर्ने उद्देश्य लिएर गजल, कविता र मुक्तक लेखिरहेका छन् ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत स्रष्टाहररूले एक साहित्यिक संस्था खोलेका छन् । सोही साहित्यिक संस्था मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय साहित्य समाजमा उनी आवद्ध छन् । उनका केही साहित्यिक रचना साहित्यिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित छन् ।
प्रस्तुत छ सारङ्गी न्युजका लागि मनु विद्रोहीले युवा गजलकार तीर्थ समीरसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
विद्रोही - साहित्यका प्रायजसो सबै विधाहरू विवादित बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा साहित्यक्षेत्रमा रुचि भएकाहरूलाई र साहित्यमा प्रवेश हुन चाहनेहरूलाई तपाईं को सुझाव के छ?
समीर - नेपाली साहित्य पहिलेदेखि नै विभिन्न विषयमा विवादित छ । र, साहित्यको छिटो विकासका लागि यो आवश्यक पनि छ। साहित्यमा रुचि भएका र प्रवेश हुन चाहानेहरूलाई यति मात्रै भन्छु कि तपाईं जे लेख्नुहुन्छ मनैदेखि लेख्नुस । यावत विवादित विषयमा नअल्झिनुस्।
विद्रोही - तपाई आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ?
समीर - दिउँसो क्याम्पस जान्छु । बिहान, साझ अलि अलि लेख्ने प्रयास गर्छु ।यही पुस १४ गते हाम्रो म.प. साहित्य समाजको बार्षिक उत्सव र काव्य शृङ्खला 'घ' आयोजना गर्दैछौँ । त्यसैको तयारीमा छु।
विद्रोही - तपाईंको विचारमा साहित्य के हो ? किन लेख्नुहुन्छ?
समीर - मान्छेको मनभित्र रहेको एउटा उत्सुकता, कौतुहुलतालाई शब्दगतरूपमा व्यक्त गरी रचनात्मक तरिकाले प्रस्फुटन गर्ने माध्यम साहित्य हो । र, यी यावत कुरालाई मध्यनजर गरेर म लेख्ने गर्छु।
विद्रोही - हाल विकास भएको सूचना प्रविधि र यसले नेपाली साहित्यलाई कस्तो प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ?
समीर - अहिलेको सूचना प्रविधिले नेपाली साहित्यमा सकारात्मक प्रभाव नै पारेको जस्तो लाग्छ। जस्तो कि अहिले फेसबुक, इन्स्ट्राग्रामहरूमा स्रस्टाहरू आफ्ना सिर्जना आदि राख्नुहुन्छ । जुन आम पाठकहरूले सजिलै पढ्न पाइरहेका हुन्छ्न् । र, पढिसकेपछिको प्रतिक्रियाले त्यसलाईलाई झन बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
विद्रोही - साहित्यलाई समाजको ऎना मानिन्छ । कस्ता कस्ता विषयवस्तुमा जोड दिने हो भने समाज परिवर्तनमा सहयोग पुग्ला?
समीर - साहित्य समाजको ऎना नै हो । हामिले समाजमा जरा गाडेर बसेका कुसंस्कार, कूरीती का बिरुद्ध, जनचेतनाका कुराहरू, समाजले भोगिरहेको तमाम यातनालगायत समाजका सकारात्मक कुरालाई पनि उजागर गर्ने गरी साहित्य सिर्जना गर्ने हो भने जरुर समाज परिवर्तन हुन्छ ।
विद्रोही - साहित्यमा राज्यस्तरबाट कस्तो कदम चालिदिए राहत महसुस गर्न सकिएला?
समीर -साहित्यको विकासका लागि सरकारले थोरै भएपनि बजेट छुट्टाइदिनुपर्थ्यो । राष्ट्रियस्तरका साहित्यिक कार्यक्रम,सम्मेलन सञ्चालन गरिदिनुपर्थ्यो । र, कम्तीमा साहित्यकारहरूलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिदिनुपर्थ्यो ।
विद्रोही - आजभोलि नेपाली साहित्यमा आगन्तुक शब्दहरू बढी नै प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले कस्तो असर पार्ला ?
समीर - आगन्तुक शब्दहरूको बढी प्रयोग भइरहेको देख्दा कतै नेपाली साहित्यकारहरूले मौलिक शब्दहरू बिर्सिनुभयो कि भन्ने डर पनि लाग्छ । यो प्रवृत्ति बढ्दै जाने हो भने नेपाली ले आफ्नो मौलिक र नेपाली भाषा नबिर्सिएलान् भन्न सकिन्न ।
मगलवार, पुष १०, २०७५, ०६:१२:००
ज्योति जङ्गललाई ७ प्रश्न
'लेखकहरू आत्मरतिमा छन्'- माधव सयपत्री
लेखन आफैंमा एउटा तपस्या हो - युवराज नयाँघरे
...यस्ता उपन्यासहरु खेलियाेस्
क्लासिक नपढी गतिलो लेखक बन्न सम्भव छैन् - महेश पाैड्याल
मंसिर २४, २०७६ मनु बिद्राेही
आख्यानकार राजन मुकारूङलाई ७ प्रश्न
मंसिर २३, २०७६ मनु बिद्राेही
नवलपुर समाज जापानको दोश्रो अधिबेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा सागर कँडेल फाल्गुन १५, २०७६
नवलपुर समाज जापानको दोश्रो अधिबेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा सागर कँडेल सारङ्गी न्यूज
किशाेरीलाई बन्धक बनाएर बलात्कार, मन्त्रीकै सल्लाहकार पक्राउ सारङ्गी न्यूज
शेर्पा संघ जापानको १२ औँ अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा दावा लामा शेर्पा सारङ्गी न्यूज
बलिदानी दिवसमा घरमै पुगेर रम्तेल बाबा आमालाई सम्मान फाल्गुन १४, २०७६
संविधान संशोधनको च्याप्टर क्लोज, बामदेवबारे नेकपाको यस्ताे निर्णय फाल्गुन १४, २०७६
एमसीसी र बाँस्कोटा काण्डमा यसकारण नेकपा माैन ! फाल्गुन १४, २०७६
छोरी पराईको नासो की संवृद्धिको साँचो ? फाल्गुन ३, २०७६
तपाई‌‌‌ राम्रो देखिन हैन्, राम्रो बन्नको लागि जिउनुहाेस् (दश मन छुने भनाईहरु) माघ १०, २०७६
एमसिसी - स्वाधीनतालाई नाटकको मन्च नबनाइदिनुस् कामरेड ! माघ १०, २०७६